ချစ်ကြည်အေး: ပင်လယ်နှင့် ကျွန်မ
“မမြနဒီ ခင်ဗျား ကိုမောင်မောင်စိုးကို သိသလား”
“ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်။ သူက… စိုးက ကျွန်မချစ်သူပါ”
“ဟုတ်ပြီ။ ဒါဆို ခု သူ ဆုံးသွားတာကိုရော ခင်ဗျား သိတယ်ပေါ့။ သူမရှိတော့ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားစိတ်က လက်ခံတယ်ပေါ့ နော်”
“ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မ သိပါတယ်။ လက်လည်း လက်ခံပါတယ်”
“ဒါဆို ခင်ဗျားတို့ ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရော မှတ်မိရဲ့လား၊ ကျွန်တော့်ကို နည်းနည်းလောက် ပြန်ပြောပြလို့ ရနိူင်မလား”
မေးနေကျ ဖြေနေကျမေးခွန်းများ ဖြစ်သော်လည်း မိန်းကလေးက အနည်းငယ်တွေဝေသွားကာ ခပ်လှမ်းလှမ်းမြေပြင်ကို အသိမဲ့လှမ်းကြည့်နေလေသည်။ သို့သော် သူမမျက်လုံးများထဲ ဘာကိုမှ တွေ့မည့်ပုံမပေါ်ပါ။
သူမမျက်နှာတစ်ခုလုံး မှုန်ကျသွားကာ နှုတ်ခမ်းများစေ့ပိတ်လျှက် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားပုံ နားထင်ကြောကြီးများ တင်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူ မှားများ သွားပြီလား။ သူ့မေးခွန်းက သူမကို သိပ်များနှိပ်စက်ရာ ကျသွားပြီလား သူ တွေးနေစဉ်မှာပင် တုန်ခိုက်တိုးရှသော သူမအသံက ဖြည်းညှင်းစွာ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။
“ကျွန်မတို့ ထွက်ပြေးကြတာပါ။ စိုးက ဆိုင်ကယ်မောင်းတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ကားတွေလည်း လမ်းပေါ်မှာ အများကြီးပဲ”
“အင်း ဟုတ်ပြီ။ ခင်ဗျားတို့က ဘာလို့ ထွက်ပြေးရတာလဲ”
“စိုးက ကျွန်မနဲ့ မခွဲနိူင်လို့။ ကျွန်မမိဘတွေက စိုးနဲ့ သဘောမတူလို့”
“သြော် ဒါနဲ့ ကိုမောင်မောင်စိုးကို ခင်ဗျားမိဘတွေက ဘာလို့ သဘောမကျတာတဲ့လဲ”
“စိုးက ဆိုးတယ်။ ဘွဲ့လည်း မရဘူး။ ပြီးတော့ ဆေးလည်း စွဲနေတယ်”
ဆေးလည်း စွဲနေတယ်ဆိုသော အဆုံးမှာ သူမအသံက အဖျားလှုပ်ခတ် သွားသလိုလိုပင်။
“ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက စိုးကို ချစ်တယ်”
“ကိုမောင်မောင်စိုး ဆေးစွဲနေတာ ခင်ဗျား သိရက်နဲ့၊ သူ ဆေးဖြတ်ဖို့ ခင်ဗျား တိုက်တွန်းခဲ့ဖူးသလား”
“ဟုတ်ကဲ့ တိုက်တွန်းခဲ့ဖူးတာပေါ့။ သူ ဆေးစွဲနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်မက သူ့ကို ချစ်နေပြီ”
ပထမဆုံးအကြိမ် သူ သူမမျက်နှာကို သေချာကြည့်မိသည်။ သူမမျက်နှာ ကလေးက ကြေကွဲနွမ်းနယ် ရိပ်ကလေး သန်းနေလျှက်ကပင် သူမချစ်သော စိုးကို ချစ်ကြောင်းပြောနေရတာကိုပဲ ခံစားမက်မော စိတ်ကလေးရှိနေသလို ထင်ရ၏။
ပြောပြီး ရှက်သွားဟန်နှင့် ခေါင်းလေးငုံ့ချလိုက်ကာ နောက်တစ်ခွန်းဆက်ပြောဖို့ အားယူနေဟန်ပါပေ။
“စိုးက ဖြတ်မရဘူး တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်မက စိုးကို ရွဲ့ပြီး သူသောက်တဲ့ ဆေးတွေ လိုက်သောက်တယ်”
“ဒီတော့ ကျွန်မပါ ဆေးစွဲသွားတယ်”
သူက သိလျှက်နှင့် တမင် မသိဟန်ဆောင်မေးလိုက်ခြင်းရယ်ပါ။ တကယ်က သူမကေစ့်ကို သူ စတင်ကိုင်တွယ် ကတည်းက သူမနှင့်ပတ်သက်သမျှ ကုန်စင်အောင် ဖတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သူမက သူမ သောက်ခဲ့ဖူးသော ဆေးပြားများကို နာမည်နှင့်တကွ မှတ်မိနေကာ ဘယ်ဆေးသောက်လျှင် ဘယ်လိုခံစားရကြောင်း၊ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်တုန်နေချင်ကြောင်း၊ ဘယ်ဆေးကတော့ဖြင့် ခုန်ပေါက်နေချင်ကြောင်း၊ ဘယ်ဆေးကတော့ဖြင့် အိပ်ချည်းပဲ နေချင်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဆေးတန်ခိုးနှင့် ဈေးနှုန်းများကိုပါ သေချာစေ့ငှစွာ မှတ်မိပြောပြနေလေသည်။
သူကပြုံးလျှက်နှင့် မေးခွန်းတစ်ခု ဆက်မေးသည်။
“ခုရော မမြနဒီ ခင်ဗျား အဲဒီဆေးတွေ သောက်ချင်သေးလား”
“ဆေးရုံမှာတုန်းကတော့ ဆရာမတွေက အချိန်တန်ရင် ကျွန်မကို ဆေးရိုးလို အတံလေးတစ်ခု ငုံခိုင်းထားတာပဲ။ အဲဒါလေး ကိုက်ထားရင် ဆေးသောက်ချင်စိတ်ပျောက်နေတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခြားဆေးတွေလည်း တိုက်တယ်၊ ကျွန်မ ကျန်းမာအောင် တဲ့။ ခုတော့ မသောက်ချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေ အားလုံးကို မေ့နေချင်တဲ့အခါ ကျွန်မ ပြန်သောက်ချင်စိတ် ပေါက်ပေါက်လာတယ်။ ကျွန်မက ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှအားလုံးကို သတိမရချင်ဘူး။ မေ့ထားလိုက်ချင်တာ”
သူမက စကားများများပြောပြီး မောသွားဟန်နှင့် ခဏနားခိုက် သူမမျက်နှာကို သူ အကဲခတ်ကြည့်နေလိုက်သည်။
ဆေးရုံက ဆင်းသွားကာစထက်တော့ အနည်းငယ် ပြည့်လာသယောင်ထင်ရသော်လည်း အမျိုးသမီး၏ မျက်နှာကျက ပါးလျသွယ်ကျမြဲပင်။ အသားအရည်တို့သည်လည်း သွေးရောင်ပြန်လည် သန်းလာသလိုနှင့် ဖြူဖျော့ရိပ်ထင်ဆဲ။ ခုဆို (၆) လပြည့်တော့မည်။ သည်အမျိုးသမီး ဆေးတွေရော ပုံမှန်သောက်ရဲ့လား သူ သိချင်လာသည်။
“မမြနဒီ ခင်ဗျား ဆေးတွေရော ပုံမှန်သောက်ဖြစ်ရဲ့လား”
လိမ်ညာလိုက်လိုဟန်စွက်သော်လည်း လူမိနေပြီဖြစ်သည်ကိုသိသော မျက်ဝန်းများနှင့် သူမက ခပ်လွန့်လွန့်လေး ပြုံးလိုက်ပြီး သူ့နောက်ကျောကိုကျော်ကာ ဆေးရုံထဲကို ကဲကြည့်လျှက် ဖြေလေသည်။
“ဟင့်အင်း ကျွန်မ မှန်မှန်မသောက်ဘူး။ တစ်ချို့ဆေးတွေ လွှင့်ပစ်လိုက်တယ် ဟိဟိ၊ ဆရာမတွေကို ပြန်မပြောနဲ့နော်”
သူမက ကလေးဆိုးတစ်ယောက်လို ညစ်ကျယ်ကျယ်နှင့် ဟိကနဲပင် အသံထွက်ရယ်မောလိုက်လေတော့ သူ စိတ်ဓါတ် အကြီးအကျယ်ကျသွားရသည်။
“ဟာ ဒီလိုတော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာ၊ ခင်ဗျား နေမြန်မြန်ကောင်းလာမှ အလုပ်လေး ဘာလေး ဝင်၊ အပြင်လောကက လူတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခါတိုင်းလို ပုံမှန်လည်ပတ်သွားလာ၊ ဒါမှ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ချမ်းသာနိုင်မယ်လေ၊ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်လူနာ မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားနေကောင်းလာဖို့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်ရှိနေတယ်လေ။ ခင်ဗျားအိမ်သားတွေကရော ခင်ဗျားကို ပုံမှန် ဆေးမတိုက်ကြဘူးလား”
သူ့အမေးအဆုံးမှာ သူမမျက်ဝန်းထဲမျက်ရည်ကြည်များ စိမ့်အိုင်စိုစွတ်လာရာ သူပင် ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ ပူပန်သွားရသည်။ သေချာပါသည်။ သူမစိတ်တွေ ပုံမှန် မဖြစ်နိူင်သေးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့လက လမ်းကြုံခိုက် သူမအိမ်ဘက်ရောက်၍ အခြေအနေဝင်ကြည့်စဉ် သူမက ပန်းကန်တွေကို နံရံနှင့်ပေါက်ခွဲကာ ဒေါသတကြီးဖြစ်နေချိန်ဖြစ်သည်။ ကျန်အိမ်သားများကို ကြိမ်းမောင်းကာ နင်တို့ ငါ့ကို အစ်မကြီးတစ်ယောက်လို နည်းနည်းကလေးမှ အရိုအသေမရှိကြဘူးပေါ့ ဟုတ်လားဟု ပြောနေသံကို သူ နားနှင့်ဆတ်ဆတ်ကြားခဲ့ရသေးသည်ပဲ။
ချစ်သူနောက်လိုက်ပြေးရာမှ ချစ်သူလည်းသေ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးများစွဲသောက်ထားသော ဒဏ်၊ မျက်စေ့ရှေ့မှာပင် ချစ်သူ ပိုးစိုးပက်စက် သေဆုံးသွားသည်ကို မြင်လိုက်ရသော အပူနှင့် ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေမှာမရှိသော သူမကို သူမအောက် အငယ်များက အရိုအသေတန်ကြမည်မှာ လွန်စွာ သဘာဝကျပါသည်။
“ကျွန်မ အိမ်မှာ မနေချင်ဘူး”
မျက်ရည်များစီးကျကာ ပြောလာတော့ သူ့ရှေ့က တစ်ရှူးဘူးထဲက တစ်ရှူးတစ်ရွက်ထုတ်ကာ သူမကို ကမ်းပေးမိသည်။ သူမက လှမ်းယူကာ မျက်ရည်များကို ပွတ်သုတ်ရင်းက ရုတ်တရက် ပြုံးရယ်လာလေ၏။
“မှတ်မိလား၊ ကျွန်မ ပန်းကန်တွေ ပေါက်ခွဲပစ်နေတဲ့နေ့ကလေ၊ ကိုဧရာမိုးမြင့် ကျွန်မကို ဘိုးလင်းပစ်ဖို့ ခေါ်သွားခဲ့တာလေ။ ကျွန်မ ပျော်တယ် သိလား။ ကျွန်မတို့ အခု သွားကြရအောင်လား”
သူမ ထိုနေ့အား ပြန်လည်မှတ်မိသွားတာကို သူကြေနပ်ပါသည်။ သို့သော် ခု သူ့မှာ အချိန်မရှိပါ။ ဖြူနှင့် သူ ဒီညနေ ညစာစားဖို့ ချိန်းထားသည်လေ။
“ခင်ဗျား ပျော်တယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော် ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ဒီနေ့ မအားသေးဘူး။ နောက်တစ်ရက်ရက်ကျ မမြနဒီသွားချင်တဲ့နေရာကို လိုက်ပို့ပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား”
သူမက ကတိရ၍ ကြေနပ်သွားသော ကလေးတစ်ယောက်လို ခေါင်းတညိတ်ညိတ် ရွှင်မြူးလျှက် ပါးစပ်ကလည်း တတွတ်တွတ် ဆက်ပြောနေသေးသည်။
“မုန်းတယ် နင်တို့ကို မုန်းတယ်။ ဘိုးလင်းပစ်တဲ့ ၆ကေဂျီ ဘောလုံးနဲ့ နင်တို့မျက်နှာကို ကြေမွသွားအောင်ကို ဆော်ရဦးမယ်။ အဟင်းဟင်း ခဏလေးပဲ စောင့်”
သူမစကားအကြားမှာ သူ မနေနိူင်တော့ဘဲ ကလေးတစ်ယောက်လို ရန်လိုနေသူ သူမမျက်နှာကိုကြည့်ရင်း သူမနှင့်အတူ ရယ်မောမိတော့သည်။
“နှင်း လာလေ၊ ဒီမှာ ကိုယ်က ဒီဘက်မှာ”
နှင်းက ခုမှ fitting room ထဲက ထွက်လာကာ လည်ပင်းလေးဘယ်ညာဆန့်လျှက် ကျွန်တော့်အား ရှာနေသည်ကို တွေ့ရ၍ လှမ်းပြောလိုက်ခြင်းပင်။
“ဘယ်လိုလဲ နှင်း အဆင်ပြေရဲ့လား”
“အင်း ၃ထည်ဝတ်ကြည့်တာ ဒီ ၁ထည်ပဲ အဆင်ပြေတယ် ကိုရာ၊ လာ ပိုက်ဆံသွားရှင်းကြရအောင်”
“ဒီတစ်ထည်ပဲ ယူမှာနော် အစ်မ”
“ဟုတ်ကဲ့ ၆သောင်းခွဲကျပါတယ် မမ”
ကောင်တာမှာ ပိုက်ဆံရှင်းတော့မှ ငွေကိုင်အမျိုးသမီးလေးဟာ မြနဒီဖြစ်နေသည်။ မြနဒီက သူ့ကို ပြုံးပြတော့ နှင်းက သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်နေတာမို့ သူကပင် စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက် ရလေသည်။
“အော်…မမြနဒီ ဒါက ဒေါက်တာနှင်းဝေဝေတဲ့၊ အေးချမ်းသာ ပရိုက်ဗိတ်ဆေးရုံမှာ လုပ်နေတယ်။ နှင်း သူက မမြနဒီတဲ့ ကိုယ့်ပေးရှင့်ထဲက တစ်ယောက်ပေါ့ကွာ”
ကိုယ့်ပေးရှင့်ထဲက တစ်ယောက်….. ကိုယ့်ပေးရှင့်ထဲက တစ်ယောက်…..
သူမ စိတ်ထဲကနေ လိုက်ရေရွတ်မိတော့ သူမစိတ်နှလုံးတို့ ဆတ်ကနဲ နာကျင်သွားရသည်။ ပေးရှင့် ပေးရှင့်တဲ့လား ကိုဧရာမိုးမြင့်ရယ်…။ နှင်းဆိုသော အမျိုးသမီးက သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို ထက်အောက်သိမ်းကျုံးကြည့်လိုက်တော့ သူမကိုယ်ကလေး ကျုံ့ဝင်သိမ်ငယ် သွားသည်ပင် ထင်မိသည်။
ငွေချေပြီးလို့ သူတို့ ထွက်သွားချိန် ငွေရှင်းကောင်တာမှာ တစ်ယောက်တည်းကျန်တော့မှ သူမမျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ် ပေါက်ကနဲစီးကျလာကာ တသိမ့်သိမ့်ငိုရှိုက်လိုက်မိတော့သည်။ သူမဘဝမှာ ခုထိ သူမ တစ်ယောက်ထဲပါပဲလေ။ သူ… သူကတော့ ပင်လယ်ကတော့ သိနိူင်မယ် မထင်ဘူး။ ဟုတ်တယ်နော်၊ ရှင် ဘယ်လိုမှ မသိနိူင်ပါဘူး ပင်လယ်ရယ်…. အတွေးနှင့် လူတစ်ကိုယ်လုံး နုံးခွေကျကာ သူမ ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်မရနိူင်တော့။ သို့သော် သူမနှင့် ဂျူတီချိန်းမည့် ကေသီလာတဲ့အထိတော့ သူမ တောင့်ခံထားရဦးမည်ပင်။
လမင်းတစ်စင်းရဲ့ ညှို့ငင်ဆွဲအားကြောင့် အရိုင်းဆန်လှိုင်းထခဲ့ရတဲ့ ရှင့်ရင်ခွင်အတွက် အနီးအပါးက ပန်းပွင့်ကလေးတွေ ခရုခွံငယ်ကလေးတွေ အုန်းလက်ကြွေကလေးတွေ သောင်ပြင်စပ်က သဲမွမွကလေးတွေကို အညှိုးတကြီး တိုက်စား ရိုက်ခတ်နေတာတော့ ရှင်.....မတရားဘူး ပင်လယ်….
သူမရင်ထဲမှာ နာကျင်ရေရွတ်နေမိသည်။ သူမနှင့် သူ့အခြေအနေက လူနာနှင့် စိတ်ကုထုံးပေးသူ အဆင့်မှာတင် မဟုတ်တော့။ ချစ်သူတွေလို့လည်း ပြောလို့မရ။ ပုံမှန် တစ်ပတ်တစ်ခါ စကားပြောကုထုံးနှင့် ကုသပေးနေရာက ခုတော့ သူမတို့ စကားတွေ နေ့စဉ်ပြောနေဖြစ်ကြသည်။
တကယ်တော့ သူမ ကျန်းမာရေးအခြေအနေက ပုံမှန်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ပြောင်းလဲသွားသည်မှာ သူမနှလုံးသား။ အဲသည် သူမနှလုံးသားတွေကဖြင့် စိုးအပြင် နောက်ထပ်အချစ်သစ်မွေးဖွား ခဲ့ရပြီပဲ….။ ပင်လယ်ကြောင့်….ရှင့်ကြောင့်ပေါ့ ကိုမိုးမြင့်….၊ ကိုဧရာမိုးမြင့်ကို သူမက ပင်လယ်ဟု ချစ်စနိူးနာမည်ဝှက် ပေးထားခဲ့သည်ကို သူ မသိပါ။ တိုးတိတ်ရှက်ရွံ့စွာ တစ်ယောက်တည်း ပြောရင်းက သူ့မျက်နှာကို ဘေးတိုက်ကြည့်လိုက်မိတော့ သူက ပြန်လှည့်အကြည့်နှင့် မျက်ဝန်းချင်းအဆုံ၌ သူမရင်တို့ လှုပ်ကနဲ ခတ်သည်။
“မြ ကျွန်တော်နဲ့ အပြင်သွားလာနေရတာ ပျော်လားဗျ”
“ကျန်းမာရေးအခြေအနေရော ကောင်းတယ် ဟုတ်”
“ဒါနဲ့ ဒီနေ့ ဘာကားကြည့်ချင်လဲ”
“အာ နောက်ပြီကွာ အတည် ပြော”
“အင်း ပြောမယ်၊ ကိုမိုးမြင့်ရွေးပေး”
“လုပ်ပြီ၊ အိုကေလေ ဒါဆို ခု ရုံတင်နေတဲ့ ကာတွန်းကား ကြည့်မလား၊ ရယ်ရတယ်လို့ ပြောတာပဲ”
သူနှင့်အတူ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ချစ်စရာကာတွန်းလေးတွေထဲ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ကာ ရယ်မောမိခဲ့ကြသည်။ သူက သူမလက်ဖဝါးကို သူ့လက်ထဲထည့်ကာ ဆုတ်ကိုင်လို့ထားခဲ့သည်။ သည်အထဲ ရုပ်ရှင်ပြနေဆဲမှာ မီးက ၂ခါတိတိ ပျက်သွားသေးတော့ သူမတို့နှစ်ယောက် အရယ်တွေက မဆုံးနိူင်ကြတော့။ ရုပ်ရှင်ပြီးတော့ သူက သူမကို ရှမ်းခေါက်ဆွဲကြိုက်လားဟု မေးကာ ကိုးသုံးလုံးမှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ လိုက်ကျွေးခဲ့ပါသေးသည်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိုးချုပ်နေပြီ။ အမေနှင့် မောင်နှမအငယ်တွေက သူမမျက်နှာကို အကဲခတ်ကြလျှက် ဘာမှတော့ မပြော။ အမေကတော့ စားပြီးပြီလား တစ်ချက်သာ မေးဖော်ရသည်။ သူမကတော့ သူမအခန်းထဲ တန်းဝင်လာကာ အဝတ်အစားပင် မလဲနိူင်သေးဘဲ ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှန်၊ ရင်ဘတ်ပေါ် လက်တင်ကာ ခုန်လှုပ်နေသေးဆဲ ရင်ကို အနိူင်နိူင်ထိန်းနေရသည်။ သူ ကိုမိုးမြင့်….၊ ကျွန်မချစ်တဲ့ ပင်လယ်ပေါ့….။ သူ ဒီနေ့ည ကျွန်မပါးကလေးတစ်ဘက်ကို ဖွဖွနမ်းရှိုက်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် မြကို ချစ်တယ်”ဟု မပြောခဲ့သလို “မြ ကျွန်တော့်ကို ချစ်လားဟင်” ဟုလည်း မမေးခဲ့ပါ။ လိုရော လိုအပ်သလား၊ သူမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ စကားလုံးတွေ မလိုအပ်ဟု သူမက ရိုးရိုးလေးပင် ယုံကြည်ပါသည်။ သူမ ဘာကိုမှ ဆက်မစဉ်းစားနိူင်ဘဲ ပင်လယ်၏ အတွေ့၌ ဆက်လက် စီးမျောနေမိတော့သည်။ သာယာစွာ....။
သို့သော် ခဏကလေးမှ ခဏကလေးရယ်။ သူမ အသိစိတ်တို့ လက်ရှိပြန်ရောက်ချိန်မှာ သူမပါးပြင်ပေါ်သို့ မျက်ရည်များ စီးကျနေပြီ ဖြစ်လေသည်။ သူမ သိပါသည်။ ကိုမိုးမြင့်၌ တူတူတန်တန် အချစ်များရှိနေသည်။ မိန်းကလေးများနှစ်သက်သဘောကျတတ်သော ရုပ်ရည်၊ ချိုသာသော အပြုံးနှင့် စွေးရီသော အကြည့်တို့ကြောင့် ချစ်သူလည်း များလှသည်။ သို့သော် သူ ချစ်သည်က တစ်ယောက်တည်းပေ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သူနှင့် လမ်းခွဲလိုက်ရသော သူ့အချစ်ဦးမိန်းကလေး….။
ခါတရံ တစ်ချို့နေရာလေးများရောက်လျှင် ကိုမိုးမြင့်မျက်ဝန်းအကြည့်တွေက ဆွေးရိပ်သမ်း သွားတတ်သည်လေ။ သွားနေကျ နေရာလေးတွေ…ဆုံနေကျနေရာလေးတွေ….စားနေကျ အစားအသောက်လေးတွေ စသည်ဖြင့် ရေရွတ်ကာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တမ်းတသယောင် သူ့မျက်ဝန်းများက ပြောကြသည်။ ထိုအချိန်မျိုးမှာ သူမက ကိုမိုးမြင့်ဘေးမှာ မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ကြောင်အအရှိနေရသည်။ အားပေးလိုက်ရမှာလား၊ စိတ်ကောက်ပစ်လိုက် ရမှာလား၊ သူမ ဘာလုပ်ရမည်မသိနိူင်ဘဲ ဝမ်းနည်းစိတ်တို့ ဆို့နင့်လာလျှက် ငိုယိုပေါက်ကွဲပစ်လိုက်ဖို့လည်းပဲ သူမ မရဲပါ။ သူမက ဘာမို့လို့လဲ….။ ကိုမိုးမြင့် လက်ရှိမိန်းကလေးလို့ ပြောရအောင်ပင် မဖြစ်နိူင်သော အခြေအနေနှင့် သူမက ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်သိရမည်ပဲလေ။ မည်သို့ပင်ဖြေတွေးပါစေ၊ သူမစိတ်ထဲကတော့ ပန်းကန်စုံတွေ တစ်ချပ်ပြီး တစ်ချပ် နံရံထဲ ပစ်ပေါက်ခွဲနေခဲ့မိသော အချိန်များပေ။
သူ့အချစ်ဦးမိန်းကလေးကို ချစ်မက်စွဲလမ်းနေစိတ်နှင့် လက်ရှိမှာ တစ်ခြားမိန်းကလေးများအပေါ် တကယ်မချစ်ဘဲ အပျော်တွဲနေတာမျိုးကတော့ သူ နည်းနည်းကလေးမှ မလုပ်သင့်ပါ။ သို့သော် သူ….ပင်လယ်က စိတ်ထင်သလို ထင်တိုင်းစီးဆင်းလျှက် ပျော်သလို နေနေပုံရလေသည်။ သူ့အနီးအပါးက မိန်းကလေးတွေကို ချစ်သလိုလို မချစ်သလိုလိုနှင့် သူကဖြင့် ဘာမှ မခံစားရဘဲ မိန်းကလေးတွေမှာသာ ရင်ကွဲပက်လက်တွေ ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရသည်ကတော့ ဆိုးလွန်းလှသည်ပဲ။
သူမကရော….။ သူမကတော့ ချစ်ရတဲ့ပင်လယ်အနီးမှာ နေခွင့်ရသလောက် အတူနေခွင့်ကိုပင် ရူးသွပ်စွာဆုတ်ကိုင်ထားမိရင်း လာမည့်နေ့များစွာကို အသေခံစောင့်ရမည်ပဲ။
တစ်နေ့နေ့ပေါ့။ တစ်နေ့နေ့မှာပေါ့ ပင်လယ်ရယ် ရှင် ကျွန်မကို ထားခဲ့ပါ။ ရှင့်လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက် စီးဆင်းပါ။ ကျွန်မ မတ်မတ်ရပ် ကျန်ခဲ့မှာပါ။ ကျွန်မ ရင်ဆိုင်နိူင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပင်လယ်ရယ်၊ ရင်တစ်ခုလုံးရင်နှီးပြီးချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ခွဲခွာဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲပြင်ဆင်ထား ပြင်ဆင်ထား၊ ဘယ်တော့မှ အဆင်သင့် ဖြစ်နိူင်မယ် မဟုတ်တာဘဲလေ….။
နှိပ်စက်လွန်းသောအတွေးများထဲ မျက်ရည်များသာ သူမ ပါးပြင်ပေါ် တစ်ပေါက်ပေါက် ကျလာနေခဲ့သည်။ သူမညာဘက်ပါးအပ်ရာ ခေါင်းအုံးလေးတစ်ခြမ်းလည်း စိုရွှဲလို့ နေခဲ့ပြီ။ မိုးလည်း လင်းလုပြီ။ သူမ မှေးကနဲ တစ်ချက် အိပ်ပျော်သွားစဉ် အိပ်မက်ထဲမှာ သူမချစ်သောပင်လယ်က သူမထံ အရှိန်အဟုန်နှင့် စီးဆင်းလို့ လာနေခဲ့သည်။ သူမ မရှောင်မိဘဲ တွေရပ်နေစဉ်မှာပင် ပင်လယ်က သူမအား ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလို့ သူမနှင့် ဟိုးအဝေးကြီးကို ခရီးဆက်လို့ သွားခဲ့ပြီ….။
သူမလက်ထဲက ကြွေရောင်လွလွဖိတ်စာလေးကို လက်နှင့်ထိတို့ကြည့်မိနေရင်းက သူ့အတွက်၊ သူမချစ်သော ပင်လယ်အတွက် သူမ ပျော်အောင် ကြိုးစားနေခဲ့ပါသည်။ ခမ်းမထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး တောင့်တောင့်ကလေး အသက်မဲ့ ထိုင်နေစဉ်ကပင် သူမ သေချာခဲ့ရသည်။ သူမဘဝမှာ နောက်ထပ်အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မရှိနိူင်တော့။ သူမအချစ်တို့ ပင်လယ်နှင့်အတူ စီးဆင်းလို့ သွားခဲ့ပြီ။
ပင်လယ်ရယ်….။ ကျွန်မ ပြောပါရစေ။ ပင်လယ်နဲ့ မြစ်နဒီဟာ တကယ်တော့ တစ်သားတည်းရယ်။ ကျွန်မတို့ မဝေးကြပါဘူး၊ မဝေးကြပါဘူးလေ၊
သူမရဲ့လက်တွေ ရှင့်ခန္ဓာပေါ် ထိတွေ့တဲ့အခါ အဲဒါ ကျွန်မအတွေ့တွေလို့သာ မှတ်ပါ။
သူမရဲ့အနမ်းတွေ ရှင့်ပါးပေါ် ဖွဖွမွှေးကြူတဲ့အခါ အဲဒါ ကျွန်မအနမ်းတွေလို့သာ မှတ်ပါ။
သူမရဲ့ လက်ဖဝါးကလေးတွေ ရှင့်ဆံနွယ်လေးတွေထဲ ထိုးသွင်းကစားနေတဲ့အခါ အဲဒါ ကျွန်မလက်ဖဝါးတွေလို့သာ မှတ်ပါ။
ရှင်နှစ်သက်စွာ စားတတ်တဲ့ ဟင်းလျာတွေ သူမပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးနေချိန်မှာ အဲဒါ ကျွန်မလက်ရာလို့သာ မှတ်ပါ။
အရာရာပါ ပင်လယ်၊ အဲဒီအတွက် ကျွန်မ ကြေနပ်မိမှာပါ။ ကျွန်မ ရှင့်အနားမှာ တစ်ချိန်လုံး ရှိနေမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပေးပါ။
သူမအတွေးတွေကို ဖာသာသဘောကျစွာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးလိုက်ရင်း နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ပန်းကန်တစ်ချပ်ကို နံရံဆီ အားယူကာ ပစ်ပေါက်ခွဲချလိုက်လေတော့သည်။
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) Wed Jul 17, 11:48:00 PM GMT+8
ရင်တွင်းမှာ တသသ နဲ့ စွဲကျန်ရစ်စေတယ် ။
တန်ခူး Thu Jul 18, 01:09:00 PM GMT+8
မြနဒီ ကံမကောင်းရှာဘူးနော်... ညွှတ်နူးလွယ်တဲ့ ပင်လယ်ကို့မချင့်မရဲနဲ့ ... တကယ်ဆို သူမှလက်မတွဲနိုင်ရင် သူ့ လူနာကို စိတ်မပင်စေပါနဲ့ လား... အချစ်တွေက ခါးလိုက်တာ မ ရယ်... နှလုံးသားနဲ့ ဖတ်လိုက်လို့ထင်ပါရဲ့.. အဆုံးမှာ နွမ်းချိသွားတာပဲ
အမ်တီအန် Thu Jul 18, 03:37:00 PM GMT+8
တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ်ရေးနေတာ အားကျလိုက်တာ...
Adora etc. Thu Jul 18, 04:35:00 PM GMT+8
မိုးငွေ့........ Thu Jul 18, 04:48:00 PM GMT+8
ဖတ်ပြီး နွမ်းလျကျန်ရစ်တယ် မကြီးရယ်…
ဆုမြတ် မိုး Mon Aug 12, 05:16:00 PM GMT+8
oh she is back , she is back , she is back <3